Ukubukela kweApple -Iwindows Apple | IPhone iindaba
Apple Watch Igama lewotshi yenkampani yeapile, isincedisi esigcwalisa ngokugqibeleleyo i-iPhone ukusinika kwiscreen sayo uthotho lwezaziso ezisebenzayo esinokuthi sizilawule kunxibelelwano lwayo olutsha olwenzelwe ngokukodwa iApple Watch.
Ukulawula iwotshi yeapile Sinesikrini sokuchukumisa kunye nevili le-roulette elibizwa ngokuba yiDigital Crown, kunye ne-gyroscope, esweni ukubetha kwentliziyo kunye ne-accelerometers, eya kuyenza ibe yinto ebalulekileyo kuninzi.
Imodeli eqhelekileyo ye intsimbi, umzekelo ezemidlalo de ialuminium kunye nomnye umnxeba ukushicilelwa en 18 ikarati yegolide. Iindidi ezahlukeneyo ze amabhonkce ukukhetha ukushiya ngokupheleleyo ukuthanda kwethu.
La impilo kunye izilinganisi, Ifashoni engayeki kwaye apho iApple Watch inokuninzi ekumele ukuyithetha ukusukela oko iyakwazi ukulinganisa umlinganiso wentliziyo yakho. Ayizukuphoswa kwimini yakho yemihla ngemihla okanye yemidlalo.
Ukuba ufuna ukwazi yonke into Iindaba malunga neApple Watch kwaye ufunde iindaba zamva nje, izincedisi, usetyenziso oluhambelana nokubukela kwe-Apple kunye nolunye ulwazi olunxulumene noko, le yindawo yakho.
Amahemuhemu malunga ne-Apple Watch Series 8 ene-flat design return
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Usuku olu-1 .
I-Apple Watch sele ibalulekile kubasebenzisi abaninzi kunye nolindelo olujikeleze entsha…
I-intrahistory enomdla kwi-solar sphere ye-Apple Watch
por UMiguel Hernandez yenzayo Iiveki ze2 .
I-Apple Watch inobuninzi bamacandelo, kwaye ngokungathi oko akonelanga, uninzi lwazo lunokwenziwa ngokwezifiso phantse ukuba…
I-Apple Watch inokubona ukusilela kwentliziyo nge-EKG elula
por ULuis Padilla yenzayo Iiveki ze2 .
Uphononongo olutsha luqhubela phambili ukuba kunokwenzeka ukuba i-Apple Watch yethu ibone ukusilela kwentliziyo ngaphambi kokuba ibonise iimpawu ...
I-Apple Watch ngaphandle kwenzwa yobushushu?
por ULuis Padilla yenzayo Iiveki ze3 .
Inzwa yobushushu bomzimba yenye yezinto ekucingelwa ukuba imodeli entsha ye-Apple Watch iya kubandakanya,…
Fumana uMceli mngeni woMhla woMhlaba wama-2022 woHlelo olulinganiselweyo namhlanje
Namhlanje yenye yezo ntsuku apho abasebenzisi be-Apple Watch banomngeni omtsha wokuthatha…
watchOS 9: Oko sicinga ukuba siyayazi malunga nenkqubo elandelayo ye-Apple Watch
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Inyanga e-1 .
Nge-6 kaJuni, i-WWDC22 iya kuqala, umsitho omkhulu wabaphuhlisi be-Apple bonyaka. Kwinqaku eliphambili...
watchOS 9 iya kubandakanya imowudi yeBattery Saver njengaleyo ikwi-iOS kunye ne-iPadOS
Imowudi yeBattery Saver kwi-iPhone kunye ne-iPad yehlisa umthamo wamandla asetyenziswa zizixhobo xa...
Ukuzimela okukhulu, amanqanaba amatsha, isivamvo sobushushu kunye neendaba ezingakumbi ze-Apple Watch
por ULuis Padilla yenzayo Inyanga e-1 .
I-watchOS 9 iya kuba ngomnye wabaphambili abaphambili kwi-WWDC 2022 ngoJuni ozayo, kwaye i-Apple ibonakala ...
I-Apple inokuyeka i-Apple Watch Series 3 kulo nyaka
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iinyanga ze2 .
I-Apple Watch Series 3 yaphehlelelwa ngoMatshi ngo-2017 kwaye idityanisiwe uqhagamshelo lwe-LTE njengento ephambili. Ngaphandle...
TOP 10 Apple Watch imisebenzi kubomi bemihla ngemihla
por ULuis Padilla yenzayo Iinyanga ze2 .
Ezona mpawu ziphambili zeApple Watch zaziwa kwabaninzi, kodwa zininzi ezinye izinto esinokuthi...
Ngo-2021 i-Apple Watch yaqhubeka ibetha zonke iintshaba zayo
por UJordi Gimenez yenzayo Iinyanga ze2 .
Kubonakala ngathi amanani okuthengisa eewotshi ezihlakaniphile ze-Apple akayeki kwaye abacwangcisi ukwenza njalo, nangakumbi…
Uyintoni umahluko phakathi kwemodeli eneGPS kunye nemodeli eneGPS + yeSelula?
Uyilungisa njani iApple Watch emileyo ebonisa iapile yeApple
Ungayifumana njani i-WhatsApp kwi-Apple Watch
I-Apple Watch kunye nomsebenzi, amaqhosha okuyiqonda
Yintoni omele uyenze xa iApple Watch yakho ingavuli okanye ingasebenzi kakuhle